Kaominin’i Toamasina : vaky ny adin’ny samy mpitantana | NewsMada
Kaominin’i Toamasina : vaky ny adin’ny samy mpitantana
Hafampana indray. Hivory tsy ho ela ny filankevitry ny Tanànan’i Toamasina amin’ity febroary ity. Nialoha izany, nivory maika ireo mpanolotsaina ny alatsinainy teo ary niresaka ny fanesorana amin’ny tranony ny filohan’ny filankevitra, Razafimanana Christian. Nahagaga ity mpanolotsaina ity fa nanasonia ny fanesorana azy ny lefitra fahatelon’ny ben’ny Tanàna nefa ny mpitantana ny kaominina, Ratsiraka Elysée no nanasonia nametraka azy amin’izany trano izany. “Mahavariana ahy koa fa misy trano natokana ho an’ny ben’ny Tanàna ao Ambohijafy ary tsy ipetrahany ka ataony inona ity trano efa nametrahana ahy ity”, hoy izy.
Ankoatra izany, mandeha ny resaka avy amin’ny mpanatanteraka fa hosintonina ny karatra maha matihanina ireo mpanolotsaina, mba tsy ahahafahan’ izy ireo manara-mason’ny asan’ny mpanatanteraka any ivelany sy hisehoana fa mpanolotsain’ ny Tanàna sy olom-boafidy izy ireo. “ Vaky tanteraka ny ady eo aminay na iray lisitra amin’ny ben’ny Tanàna, voafidy amin’ny anaran’ny Mapar aza ” hoy ny mpampakateny voalohany, Razafinjatovo Simon.
Mila olona tia fampandrosoana
Etsy andaniny, tsy mitovy hevitra koa ireo mpanolotsaina. Miketrika ny hampiato ny ben’ny Tanàna amin’ny asany ireo mpiray lisitra aminy. Mifanohitra amin’ izany ny hevitry ny mpanolontsaina Tim sy ny HVM. “Tsy tokony hofidina eo amin’ny toerany intsony ny filohan’ny filankevitra”, hoy izy ireo. Nohamafisin’ ireto avy amin’ny Tim sy HVM ireto koa fa anisan’ny antony nahatonga ny olana niitatra hatramin’ny fanesorana ny filohan’ny filankevitra amin’ny tranony ny fizarana tsy mitovy eo amin’ny fandaniam-bola tsy am-piheverana. “Vaky ny adin’ny samy Mapar. Hanambatra ny heriny kosa ny mpanolotsaina hafa mba hametrahana filoha vaovao hitarika indray ny filankevitry ny Tanàna. Mila olona tia fampandrosoana ny tanàna, mba ho Toamasina madio, mandroso”, hoy mpanolotsaina, Rakotomanana Gervais.